Toban Toban Raadin Meelo Shaqo Badan ee Dubai | Hagaha Raadinta
Toban meelood oo Shaqo Raadineed oo caan ah oo ku yaal Dubai kuwaas oo kaa caawinaya inaad shaqo hesho.
Dubai, caasimada ganacsiga ee Imaaraadka Carabta waxaa lagu yaqaanaa qaab nololeedkeeda qaaliga ah, tayada nolosha, nabadgelyada, dhismaha, iyo dulqaadka diinta.
Daraasado kaladuwan sida kii hore ee Ururka 'Insead Alumni Association of France' ayaa lagu qiimeeyay Magaalada Dubai ayaa ah magaalada ugu tirada badan dunida ee lagu noolaado laguna shaqeysto. Dubai waxay noqotay guri labaad oo duulimaadyo badan oo ku nool kana shaqeeya shaqadan soo dhaweynta leh Emirate.
Ma ka fiirsaneysaa inaad u guurto Dubai shaqo oo aad u shaqeyso, horeba ugu noolaa Dubai iyo diyaarinta tan xigta mustaqbalkiisa dhaqaaq, ama arday doonaya inuu galo suuqa shaqada?
halkan waxaa ku qoran toban meelood oo caan ah amar gaar ah oo kaa caawin maayo inaad hesho waxa ku xiga shaqo riyadeed Dubai.
LinkedIn waa xiriirinta xirfadleyda adduunka ugu weyn goobta iyo tan ugu caansan sidoo kale. Iyada oo ah baraha bulshada, waxay isku xidhaa dadka adduunka oo dhan inta badan shaqaaleysiinta iyo shaqo doonka. Si aad u isticmaasho LinkedIn, waxaad ubaahantahay inaad isqorto oo aad dhisatid astaantaada. Mar haddii tan la sameeyo, waxaad hadda bilaabi kartaa inaad dadka la xiriirto. Badanaa, LinkedIn wuxuu soo jeedin doonaa dadka inay ku xirnaadaan ku saleysan astaantaada. Ku bilow shaqooyinka, ka hel astaamaha "Shaqooyinka", kuqor meesha aad ka shaqeyso iyo goobtaada oo bilaw raadinta.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo si fudud loo codsan karo: LinkedIn si otomaatig ah ayaad kuugu dhejin kartaa faahfaahintaada buuxda ee qorista qorista adoo gujinaya, ama dib udhigida meel dibedda ah oo aad si siman u codsan kartid isla doorka. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa Shaqooyinka si toos ah u raadso bogagga shirkadda, Xirfadlayaasha Kheyraadka Aadanaha, ama bogagga Shirkadaha Shaqaaleysiinta kuwaas oo dhammaantood kuxiriira xiriir toos ah si aad u soo gudbiso CV-ga iyo Resures-ka. Khadka adeegga 'LinkedIn Premium' wuxuu kaloo kuu oggolaanayaa inaad toos ula xiriirto kuwa qora shaqa qorista iyo waxay bixisaa qiimeyn aragti sare ah oo loogu talagalay shaqooyinka la dalbaday.
Waxa kale oo muhiim ah in la dhiso shabakad sax ah oo lala yeesho dadka ka hawlgala goobtaada ama kuwa xilal u qora si joogto ah si loo caawiyo dadka shaqo doonka ah.
Marka laga reebo howlaha shaqo raadinta, waxaa jira qoraalo iyo maqaallo badan oo ay wadaagaan shakhsiyaadka, shirkadaha iyo kooxaha waxtarka u leh nolosha iyo horumarka shaqada.
LinkedIn Xirfad shaqo oo ku taal Dubai
Runtii waa goob shaqo oo caalami ah oo shaqo raadis taas oo waxay siisaa aalad loo shaqeeyayaasha inay ku soo dhejistaan ​​shaqadooda, iyo shaqo dooneyaasha inay codsadaan shaqooyinkan. Dadka shaqo doonka ah waxay iska qori karaan websaydhka ama kala soo bixi karaan arjigooda Google Ku ciyaar Android ama App Store qalabka macruufka. Markaad isqorto, waxaa lagaa codsan doonaa inaad buuxiso astaantaada iyo CV-gaaga ama Resume. Taas ka dib waxaad diyaar u tahay oo aad qarka u saaran tahay inaad codsato shaqadaada Dhab ahaantii; waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad gujiso 'Codso' waxaana magacaaga si otomaatig ah lala wadaagi doonaa shaqaaleeyaha, ama waxaa loo diri doonaa goobta shaqada halkaas waad dalban kartaa isla doorka.
Si aad u hesho doorka aad rabto, waxaad u baahan tahay inaad baarto erayga muhiimka ah iyo meesha, iyo dhammaan shaqooyinka qaybtaas waa la soo bandhigi doonaa oo si otomaatig ah ugu keydisaa dejinta astaantaada raadinta sahlan marka xigta. Indeed.com waa goob shaqo oo bilaash ah oo raadinta, iyo waxaad ka heli kartaa doorar shaqo oo la xayeysiiyay laga bilaabo dhammaan waaxaha iyo warshadaha. Waxaa jira qayb loogu talagalay dib u eegista Shirkadda halkaas oo aad toos uga heli karto macluumaad ku saabsan waxqabadka Shirkadda ee ku saabsan suuqa shaqada, mushaaraadka iyo shaqooyinka furan.
Dhab ahaantii - Toban Toban Raadin Meelaynta Shaqada ee Dubai
Bayt waa mid ka mid ah hogaamiya albaabada shaqada raadinta khadka tooska ah Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Nidaamkani wuxuu muujiyey inuu yahay mid wax ku ool ah abuurista fursado lagu xidho shaqo-qorista iyo shaqo doonka. Waxaa jira doorar shaqo oo kala duwan oo loo xayeysiiyay UAE Muwaadiniin, Shaqo Gelid / Galitaan Shaqooyin, Heer dhexe, Sare iyo Khabiiro, Shaqooyinka fulinta iyo shaqooyinka waqtiga dhiman ah. Adigoo si fudud u galaya websaydhkooda isla markaana maraya diiwaangelin lacag la’aan ah, waxaad bilaabi kartaa dalbashada shaqooyinka. Waxa kale oo jira ikhtiyaar ah in lagu dhiso CV-gaaga goobta oo leh doorashada ah ka dhigaya astaantaada guud mid loo shaqeeyaha si loo kordhiyo aragtida.
Kuwa raadinaya loogu talagalay adeegyada qorista xirfadeed ee CV, Bayt.com ayaa tan si toos ah ugu soo bandhigeysa websaydhkooda oo leh ikhtiyaar ay ugu turjunto af Carabi, ku dar Waraaqda Daboolida oo Dhiso astaantaada xiriiriyahaaga. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qaybta baloog websaydhka oo bixiya talooyin iyo ilo shaqo raadinta, kobcinta shaqooyinka iyo aqoonta suuqa.
Kuwa aan raadineynin shaqo deg deg ah isla markiiba, waxaa jira ikhtiyaari ah in loo soo diro CV ee ku jirta barta Bayt.com kaas oo laga heli karo shaqaale qorista iyo Shirkadaha.
Bayt.com - Toban Toban Raadin Shaqo Raadinta ee Dubai
Khayaanada ayaa ah hogaaminta ugu sareysa ee shabakada tooska ah ee UAE. Websaydhku wuxuu leeyahay qayb 'Shaqooyin' meeshaasoo shaqo-dooneyaashu ka raadin karaan oo ka heli karaan shaqooyin. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad iska diiwaangeliso koonto cinwaan ah, galitaan, galiso CV-gaaga oo aad isticmaasho boorsadaada si aad u maamusho raadintaada shaqo. Markii hore, waxay bilaash u ahayd loo shaqeeyeyaasha iyo shaqaaleysiinta inay ku soo dhejiso shaqooyinka goobta. Tan iyo markii ay shirkaddu billowday adeeg lacag lagu bixiyo arrintaas, shaqooyin yar ayaa la soo dhigay, laakiin mid ayaa la xaqiijin karaa waxay codsanayaan shaqo jira maadaama ay jiraan wax badan oo caddeyn ah oo lagu daray aaminaadda goobta.
Waxaad ka raadin kartaa shaqooyinka cusub maalin kasta Shirkadda, Sector ama Location dhammaan heerarka shaqada sidoo kale doorarka Fulltime ama Qaybta wakhtiga. Waxaa jira a blog qaybta bogga oo ay ku jiraan qodobo la soo saaray shaqo raadin iyo hormar shaqo.
Gulftalent waa bixiye goob goob shaqo raadis oo saldhigiisu yahay Dubai iyo oo bixiya adeegyo Bariga Dhexe iyo Khaliijka iyo gobolka Waqooyiga Afrika. Adigoo iska diiwaangelinaya websaydhkooda, waad soo gali kartaa CV-gaaga oo aad ku dhisi kartaa astaantaada xirfadeed ee Gulf Talent khadka tooska ah adiga oo bixiya dhammaan macluumaadka laxiriira ee la xiriira raadintaada shaqo.
Gulf Talent ma aha oo kaliya inay shirkadaha u soo bandhigaan qorshe ay ku xayeysiinayaan shaqadooda laakiin sidoo kale intooda badan hayadaha shaqaalaynta Isha CV-yada ee shaqo doonka ah (ikhtiyaari) iyada oo loo marayo xogtooda. Diiwaangelinta, waxaa jira a ikhtiyaar si aad u hesho digniinta shaqada ee ku habboon iyo dib-u-fiirin CV ah oo bilaash ah. Kuwa shaqo doonka ah waxay waliba ka faa iidaysan karaan adeegyadooda xirfadeed ee Qorista CV iyo muujinta adeegyada qiimaha. Kheyraadka kala duwan sida koorsooyinka, Macluumaadka mushaharka iyo baarista suuqa shaqada waxaa sidoo kale laga heli karaa websaydhka.
Joornaalada waa a habka ugu caansan ee lagu helo macluumaadka shaqooyinka banaan ee Dubai labadaba khadka tooska ah iyo qoraalka. Inta badan wargeysyada UAE waxay leeyihiin qaybo u heellan xayeysiinta shaqooyinka banaan.
Amaah: Khaleej Times
Gulf News akhristayaasha waxay heli doontaa shaqooyin banaan oo cusub Boggooda la soocay iyo macluumaadka shaqadooda qaybta 'Shaqada'. Shabakadooda internetka ee getthat.com waxay leeyihiin qayb go'an oo ay ku taal shaqo dooneyaasha way isdiiwaangalin karaan oo codsan karaan shaqooyinka.
Khaleej Times wargeys, maalinlaha UAE ee orodka dheer ee Ingiriiska maalin kasta sidoo kale waxay bixisaa liisaska shaqooyinka qayb oo daabacan. Buzzon waa iibsigooda waxayna iibiyaan Xariirka internetka oo sidoo kale leh qeyb gaar ah oo loogu talagalay shaqo raadin. Halkan, dadka shaqo doonka ah waxay heli karaan macluumaad faahfaahsan dhanka doorka la xayeysiiyay iyo macluumaadka lala xiriirayo si loo dabaqo.
Al Waseet Waxa lagu heli karaa daabacan iyo khadka tooska ah ee internetka a Qaybta 'Shaqooyinka' meesha ay shaqo-dooneyaasha ka heli karaan macluumaad Ingiriisiga iyo Carabiga labadaba shaqooyinka la heli karo oo ay ku jiraan sida iyo meesha laga codsado.
Akhrisku waa warqad wargelin bilaash ah toddobaadle ah oo la daabaco waxaana laga heli karaa dhammaan Dubai Metro Stations. Oo sidaas daraaddeed, safarkaaga xiga ee Dubai Metro, waad dooran kartaa Nuqul ka hel oo xayeysiiso boos bannaan oo shaqo bogga 'Classified' ee Reading ama hel talooyin xirfadeed oo ku saabsan boggooda internetka.
Laimoon waa a bogga shaqada ee isku xira loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha iyadoo la hubinayo inay ka jawaabaan codsadayaasha shaqo ee ay masraxa ku hayaan. Waa goob bilaash u ah loo shaqeeyeyaasha iyo shaqaalaha labadaba, xaruntiisu tahay Dubai iyadoo ay adeegyo ka jiraan illaa soddon waddan. Markaad shaqo ka raadinayso halkan, waxaa ugu wanaagsan in la dalbado Shirkadaha 'Laimoon Verified'. Kuwani badanaa waa qarsoodi laakiin waxaa hubiyay oo oggolaaday Laimoon iyo bixiyaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan doorka ay ku jiraan faahfaahinta mushaarka.
Laimoon sidoo kale wuxuu leeyahay a qaybta loogu talagalay koorsooyinka meeshaad ka heli karto macluumad ku saabsan haya'adaha bixiya tabobar si kor loogu qaado naftaada tacliin ahaan. Ikhtiyaarada tababarka shirkadaha ayaa sidoo kale laga heli karaa iyaga barta internetka ee kooxaha iyo Shirkadaha yaa jeclaan lahaa inuu ka faa’iidaysto adeeggan.
Naukrigulf waa goob shaqo raadin taas oo waxay fursado siisaa Bariga Dhexe gaar ahaan wadamada khaliijka ee UAE, Saudi Arabia, Cumaan, Baxrayn iyo Qadar. Habka shaqo looga helo Naukrigulf.com wuxuu ku bilowdaa isdiiwaangelinta si lacag la’aan ah si looguugu sameeyo koonto, ka dibna boostada ugu soo dir Resumeynkaaga qadka. Dhowr Shirkadood oo sarsare ee gobolka ayaa ku xayeysiiya doorka shaqada Naukrigulf.com iyo sidaas oo kale waxaad ka raadin kartaa doorka aad door bidday adoo ku qoraya qeybta shaqada, xirfadda, magacaabista, Magaca shirkadda ama goobta loogu talagalay ciyaarta saxda ah.
Boggooda hore waxay leeyihiin soo koobis ah Loo shaqeeyayaasha iyo lataliyayaasha la soosaaray, Isbadalada shaqooyinka raadinta, iyo talooyinka shaqada. Waxay sidoo kale ku bixiyaan Resume qoraal iyo Resume adeegyo toosh ah oo laga helo boggooda lacag ahaan. Naukrigulf app-ka waxaa lagala soo bixi karaa Google Play for Android, iyo App Store oo loogu talagalay aaladaha macruufka.
Monstergulf waa sidaas oo kale suuqa shaqada raadinta ee shaqo doonka ah ee suuqyada UAE, Saudi Arabia, Baxrayn, Kuweyt, Cumaan iyo Qadar iyo weliba dalal yar oo Aasiya iyo Far-Bari ah. Markii aad iska diiwaangeliso goobta si bilaash ah, dadka shaqo doonka ah waa lala xiriirin karaa oo codsan karaan doorar shaqo oo ku habboon xirfadahooda, khibradooda iyo aqoontooda oo leh shirkadaha ugu sarreeya gobolka. Monstergulf waxay xayeysiisaa shaqooyinka dhammaan qaybaha iyo dhammaan heerarka shaqada oo ay ku jiraan kuwa fulinta iyo shaqooyinka buluuga ah.
Adeegyadooda Xannaano Siinta Macaamiisha, macaamiisha ayaa wici kara nambarkooda bilaashka ah ee Imaaraadka iyo Sacuudiga ama uga daa nambarkooda mobiillada websaydh si loo helo wicitaan. Adeegyada la bixiyo waxaa ka mid ah Qorista Ku-soo-noqoshada Xirfadeed, Resume Highlighter, iyo Xirmooyinka Kormeerka Shaqada lacag.
Tababarada iyo Fursadaha Xirfadaha
Codsashada layliyo iyo fasax shaqooyinka waa hab wanaagsan oo loogu talagalay ardayda inay galaan suuqa shaqada ee UAE iyo inay helaan khibrada shaqo ee ay ugu baahan yihiin inay ku sii socdaan xirfadahooda. Waxaa jiray dhowr kiis oo interns la siiyo fursado-buuxa oo ay la shaqeeyaan Shirkadaha ay u tababaraan si ku saleysan wax qabad. Inta badan xarumaha waxbarashada ayaa leh irridda shaqada meesha ay Shirkadaha ku xayeysiiyaan interns, si kastaba ha noqotee, badiyaa goobaha shaqada ee kor ku yaal iyaguna sidoo kale waa isku mid. Haddii kale, haddii ay jiraan Shirkado gaar ah oo aad jeclaan lahayd inaad ku dhex tababarto, waa suura gal fiiri qaybaha shaqada ee boggooda fursadaha shaqo barasho.
Xafladaha Shaqada ee Dubai
Mar mar, dhowr baa jira carwooyin xirfadeed oo laga soo abaabulay gudaha UAE halkaas oo shaqo-dooneyaasha iyo shaqo-ku-tababaruhu ka-qaybgali karaan. Dhacdooyinkaas, musharraxiintu waxay heli karaan warbixin hore oo ku saabsan Shirkadaha shaqaaleysiinaya, faahfaahinta shaqada iyo waliba macluumaadka laxiriira ee shabakadda oo si toos ah ula kulan shaqalaha. Mararka qaarkood waraysiyo ayaa lagu qaadi karaa goobta, waxay kuxirantahay Shirkadda ama Doorka sidaa darteed iska hubi inaad dharka u labisato marka aad ka qeybgeleyso carwooyinkaan. Qaar ka mid ah carwooyinka sida HVACR Careers Fair iyo Fasaxa Qalinjabinta ADIPEC waa warshado iyo shuruudo gaar ah sidaa darteed waxaa muhiim ah in la ogaado bartilmaameedka dhacdada kahor intaadan imaan.
Bandhigga Shaqada ee Qaranka ayaa furan dhammaan shaqo doonka ee waaxyaha kala duwan ee gudaha Imaaraadka Carabtasi kastaba ha noqotee, diiwaangelinta ayaa looga baahan yahay si ay uga soo qeyb galaan munaasabadda. Carwadannimada UAE waa qasab in ay xaadirto shaqo doonka waxa lagu qabtaa Xarunta Ganacsiga Dunida ee Dubai, halkaasoo Shirkadaha ugu sareeya Imaaraatka ay soo bandhigayaan. eFair waa carwooyin shaqo oo khadka tooska ah laga barto ee magaalada Abu Dhabi kaas oo isku xidha shaqo doonka iyo shaqa qorista. Waxaa jira xulashooyin ku qoran Ingiriisiga iyo Carabiga labadaba si loo diiwaangaliyo goobta.
Marka laga reebo tobanka aaladaha iyo wadooyinka, hab dhaqameedka loo yaqaan "Word-of-Mouth" ayaa waliba caddayn kara wax ku ool ah raadintaada shaqo. Sida mabda'a nolosha, waxaad noqoneysaa qofka aad ugu guurto inaad ku xiriirto shabakadda dadka saxda ah waxay gaari doontaa natiijooyinka ugu badan. Had iyo jeer waxaa jira qof aqoon u leh furitaanka shaqada kuna xirma ama kugula taliyo shaqaalaynta ku habboon. Ku biir kooxaha ku habboon barnaamijyada warbaahinta bulshada ee la xiriira shaqo raadinta oo kaqeyb gala howlaha bulshada. Tabaruciddu waa hab wanaagsan oo bulshada looga adeego iyo waxay kaloo bixisaa fursado isku xirnaan.
kala duwan Shirkadaha shaqaalaysiinta waxaa laga heli karaa Dubai shaqa doonka oo jeclaan lahaa inuu isticmaalo adeegyada hay'ad.
Loogu Talagalay: Toban Isticmaal Meeleyn Raadinta Shaqada ee Dubai
Waxaa jira dhowr sheekooyinka guusha ee expats kuwaas oo bilaabay oo horumariyay shaqooyinka Dubai. Sheekadaadu waxay noqon kartaa isku mid ama xitaa way fiicnaan kartaa adoo qaadanaya Talaabooyinka saxda ah ee laguugu talagay guuritaankaada nolosha ee xigta ee Dubai. Waxaanan idiin rajaynayaa ugu wanaagsan oo dhan!
Toban Qalab Raadinta Shaqo Raadinta ee Dubai, Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay maqaalkeena oo aad maamuli kartid naftaada. Hadana waad ogtahay sidaad shaqo ugu helikarto Magaalada koowaad ee aduunka inay ku noolaadaan oo shaqeeyaan.
Shirkadda Dubai City hadda siinaya tilmaamo wanaagsan shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Shaqooyinka ku yaala Dubai. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin iyo shaqooyin dalka Imaaraadka Carabta Emirates oo leh luqaddaada.